Al-Shabaab oo kaalinta 3-xaad ka galay ururada Qatarta ugo badan ku haya xasiloonida dunida
Warbixin lagu Daabacay Website-ka Deutsche Welle oo ka soo baxa Dalka Jarmalka ayaa waxaa lagu sheegay in Dagaalamayaasha Al-shabaa ay Kaalinta sedexaad ka Galeen dagaalyahanadda Qatarta ugu adan ku haya Xasilloonidda Dunnida.
Warbixinta ayaa Waxaa lagu Bilaabay Hugamiye yaasha Dunnida ayaa Shaaca Ka qaaday Argagixisadda Caalamiga ah ee Halista aan daahneeyn ku Haya Nabadda iyo Xasiloonidda dunidda.
Kaalinta 1 aad ee ururadda Halista ku ah Nabadda Dunida waxa Galay Dagaal yahanadda Daacish ee la baxay Qilafadda Islaamka oo inta Badan Ka dagaalama Wadamadda Siiriya iyo Ciraaq.
Ururka Abuu Sayaaf oo la Aas-aasay Sanaddii 1991 kii kana dagaalama Dalka philipine ayaa waxaa uu galay Kaalinta Labaad ee Ururradda Dunidda Qatarta ku ah .
Xarakadda Al-shabaab ayaa Qaatay Kaalinta sedexaad kadib markii ay Waafaqeen Astaamihii kala kula xulashadda ee Kaalima ay ugu kala hormareen Ururradda loo Aqoonsaday in ay Nabadda Dunidda Qatar ku yihiin.
Warbixinta aan Xiganeeyno ayaa lagu sheegay in Tiradda Dagaalyahanadda Al-shabaab ay u dhexeeyso 7000 illaa 9000 oo Ruux.
Waxaa sidoo kale Warbixinta lagu Xusay Weeeraddii ugu Dameeyay ee Al-shabaaab ay Dalka Gudihiisa ka geeystaan iyo Awoodda ay u leeyihiin Sii wadidda Weerarro kale oo dheeri ah.
Ururradda Taalibaan ee Dalka Pakistaaan, Boko xaraam Nigariya, Al-nusra front Siiriya, iyo Xisbullahiga Lobnan ayaa Sida ay ukala Horreeyaan u kala Galay Kaalimaha Dhiman ee Todobadda Urur ee loo Aqoonsaday in ay Qatar ku yihiin Xasiloonidda Dunidda.